Amakhemikhali avela kweso elibi futhi ahlasele. Iyiphi i-amulet okumelwe uyenze ukuze uzivikele ehlweni elibi?
Amakhemikhali avela kweso elibi futhi athwala
Izici zezinkanuko ezivela kweso elibi nokuthi ungayenza kanjani wena ngokwakho.
Iningi lanamuhla lanamuhla lingase libukeke lithekhnoloji futhi lize litshengise, kodwa kusekhona indawo yento engacacile futhi engaziwa. Naphezu kokuthuthukiswa kwemithi kanye nemizamo eminingi ososayensi yokuchaza yonke into, abaningi basakholelwa emthonjeni wemilingo "yamandla obubi" futhi bazama ukuzivikela ngokusebenzisa izifiso ezihlukahlukene. Kuyafaneleka ukuvuma ukuthi kungenzeka ukuba wenze i-amulet esebenzayo, into esemqoka ukuthi ukwazi ukubhekana nale nqubo ngendlela efanele.
Kunezintandokazi eziningi ezahlukene. Abanye babo bazivikela esweni elibi, abanye bevela emonakalweni, abanye bavikela indlu enkingeni. Uma udala i-amulet kubalulekile ukuqonda ngokucacile ukuthi kungani wenza lokhu.
Amaphutha avela kweso elibi
Iso elibi libhekwa njengendlela elula kakhulu yomphumela womlingo kumuntu, ngakho-ke kulula ukuyivikela kulo. Ngisho nomuntu olula ongenawo amakhono omlingo angayenza. Ukubukeka okubi, izifiso, imicabango emona.
Indlela elula ukuphikisa iso elibi ngepini elula yokuphepha. Kufanele njalo igqoke izingubo ezivela ngaphakathi. Iphini lizobonisa ukuthi ngabe othile uzame ukukuthinta ngandlela-thile. Ngakho-ke, uhlole ngokucophelela nsuku zonke. Uma uqaphela ukuthi iphuzu lepini limnyama, kusho ukuthi uthatha iso elibi noma uyayilahla futhi udinga ukulahla ngokushesha ngangokunokwenzeka. Yisusa masinyane bese uyifaka emhlabathini ngendlela evulekile.
Amapulisi avela esweni elibi lesotshani, ngenxa yokudalwa kwawo kungcono ukusebenzisa i-clover, i-St John's wort nendlovu. Ungenza isikhwama sokuzivikela ngokwakho. Ukuze wenze lokhu, thatha indwangu elula, wenze isikhwama salo, ufake kancane otshanini abese ubophe. Kungcono ukuqoqa lezi zitshalo, ngakho-ke uzokwenza i-amulet enamandla kakhulu.
Amakhemikhali avela kumonakalo
Loluhlobo lwe-amulet luyinkimbinkimbi kakhulu, ngoba umonakalo umphumela wethonya elinamandla labantu abanamakhono athile. Okuvamile futhi eqinile yi-amulet enegama elithi "iso likaNkulunkulu". Kungenziwa ngokuzimela ngosizo lwezintambo ezivame kakhulu ezinemibala eminingi yoboya. Kumelwe ubeke phansi izinti ezimbili zamapulangwe bese uhambisa izintambo phezu kwazo. Le-amulet ibhekwe njalo nawe. Uma ufuna ukuvikela ingane, yibeke phezu kwesitezi noma isikhala.
Ungalokothi unike noma yiziphi amawadi akho. Kufanele bakondliwe kuphela amandla akho, ngaphandle kwalokho imisebenzi yabo yokuvikela ngeke isebenze.
Ukuphumelela okufanayo ngamatshe. Uma ufuna ukusebenzisa itshe njenge-amulet kusuka ku-spoilage, kungcono ukukhetha okukufanelana nesibonakaliso se-zodiac. Ukuvikelwa kwaso wonke umuntu wonke kubhekwa njenge-agate omnyama, iso lekati, inyanga yenyanga. Ukuvikela ingane, ilanga le-tiger noma i-malachite lihle. Lawa matshe kumelwe agqoke ngaso sonke isikhathi futhi anganikezwa kunoma ubani.
Ward for indlu kusuka iso elibi
Izintelezi zasekhaya zingagcina ikhaya lakho futhi zingavumeli imicabango engaphandle, okungenani okungalimaza yona. Kunezinhlobo eziningana zabanakekeli basekhaya futhi eziningi zazo ungazenza wena.
Okuvamile kakhulu umshanelo. Ungayithenga, kodwa kungcono ukuzakhela. Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa noma yiziphi ama-twig, ama-herbs bese uthayipha. Uma uqoqa, qiniseka ukuthi ucabanga ukuthi indlu yakho ivikelwe futhi amabutho amabi angeke angene kuwo futhi akulimaze wena nabathandekayo bakho. Hlanganisa umshanelo emnyango wangaphambili.
Izintelezi ezenziwe yedwa ziyizinamandla kakhulu futhi zizokuvikela ngaso sonke isikhathi ngeso elibi nanoma iyiphi enye ithonya.
Yiziphi amasiko namasiko emazweni ahlukene lapho kuzalwa usana?
I-Horoscope yonyaka ka-2011. Leo
Abantu abazalwa ngonyaka wengulube
I-Horoscope yomfazi wesifo somdlavuza ka-2010
I-Horoscope ngesibonakaliso sezinkanyezi zonyaka
Umlingo wangempela: ukuthola amandla
UHam enenyama enobuthi
Isinkwa se-Cream se-courgettes nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Ukuphila komuntu siqu ka Natalia Varley
Indlela yokugcina isisebenzi esibalulekile?
Ngumuphi umuntu oyidingayo ukuze uthole uphawu lwezinkanyezi?
I-Appetizer "Mosaic" kusuka utamatisi, amathanga kanye ukhukhamba
Ukuhleka komuzi: i-palette yesithunzi uGwen Stefani & Urban Decay
Isaladi nge-apula, izinsuku namantongomane
Indlela yokwakha ubuhlobo nomuntu ohlukanisile?
Imithetho eyishumi yokuphikisana okwakhayo
Ukuphila emva kocansi
UClive Staples Lewis, biography
Casserole "Ngesifiso sikaPike"
Silungiselela ukuhlangabezana nezimvula ekwindla: yini ezokwenziwa imfashini ekwindla 2015